के पनौतीको लामाडोल सामुदायिक बनमा स्थापना होला त ‘केयु’ का दुई शाखा ? – मिलिजुली खबर
के पनौतीको लामाडोल सामुदायिक बनमा स्थापना होला त ‘केयु’ का दुई शाखा ?
पनौती नगरपालिका र धुलिखेल स्थित काठमाडौँ बिश्वबिद्यालयबीच दुई वटा संकायका केहि भाग सञ्चालन गर्ने सहमति अनुसार नगरपालिकाले तदारुकता देखाएको छ । नगरप्रमुख भिम न्यौपाने, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत इन्द्र प्रसाद अधिकारी, वडा सहितको टोलीले स्थानीयसंग छलफलको प्रारम्भ गरेको छ ।
तीन महिना अघि केयुले स्कुल अफ ‘ल’ र स्कुल अफ ‘इन्जिनियरिङ्ग’ को ‘आर्किटेक्चर’ अध्ययन गराउन भौतिक संरचना निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । त्यहि सहमति अनुसार नगरप्रमुख न्यौपाने बरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत अघिकारी, वडा नम्बर ३, ४ र ८ लाई साथैमा लिएर छलफल गर्न पुग्नु भएको हो ।
पनौती नगरपालिकाको अनुरोधमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेजका प्रिक्लिनिकल स्कूल, फोक्सो उपचार केन्द्र, केयु हाइस्कूलका साथै स्कूल अफ ल पुरै, स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेज (धुलिखेल) को विशेषज्ञ अस्पतालकै रुपमा एउटा आउटरिच सेन्टर र स्कूल अफ इन्जिनियरिङको सिभिल (आर्किटेक्चर) को एउटा केन्द्र स्थापना राख्ने सहमति भएको थियो ।
बैठकले पनौती नगरपालिकाको केन्द्रको वरिपरि कम्तीमा १ सय रोपनी जग्गा स्कूल अफ लका लागि व्यवस्थापन, काथं गणेशस्थानसँगै विशेषज्ञ अस्पतालका लागि जग्गा र भवन निर्माणका साथै प्राचीन शहर पनौती बजारभित्रै आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि केन्द्र स्थापनाका लागि प्रारम्भिक कार्यहरु सुरु गर्ने सहमति गरेको थियो ।
पनौती नगरपालिकाले केयुका पूर्वाधार विकास र शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै सहयोग गर्ने नगर प्रमुख भीम न्यौपानेले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो । नगरप्रमुख न्यौपानेको प्रतिबद्धता अनुसार नै लामाडोल सामुदायिक बन उपभोक्ता समिति र स्थानीयसंग छलफल गरिएको हो ।
छलफल निकै सकारात्मक भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । तर उपभोक्ताले भने केयूलाई यति धेरै जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा त्यहाँका उपभोक्ताले पाउने अवसरको सुनिश्चितता खोजेका छन् ।
नगरप्रमुख न्यौपानेको टोली पुगेपछि सोहि सामुदायिक बनका उपभोक्ता समेत रहनुभएका पत्रकार रामकृष्ण बञ्जाराले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो लेख्नुभएको छ ‘पनौती नगरपालिका मेयर भिम न्यौपानेले लामाडोल देबि थुम्का सामुदायिक बनलाई काठमाण्डौ बिश्व बिद्यालयले स्कुल अफ ल र ईन्जिनियरिङ अन्तर्गतको आर्किटेक्चर विषयहरू अध्यापनका लागी आवश्यक पुर्वाधार निर्माण गर्न उक्त स्थान ठिक भएकोले उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको कारण आज बन उपभोक्ताहरूको राय लिने आएको बताई रहदा उपस्थिती मध्य बहुसंख्यक उपभोक्ताको असहमतिका स्वर आएको छ ।
बैठकमा बनसंग सरोकार राख्ने उपभोक्ता समिति, जिल्ला बन कार्यालय र केयूका प्रतिनिधी उपस्थित थिएनन् । २५० रोपनी सार्वजनिक जग्गा दिएर सार्वजिक स्थल मास्नु चै ठीक नहुने आवाज उठे । केयूलाई यो जमिन बिकल्प खोज्न उपभोक्ताले सुझाएका छन् ।’
धुलिखेल जवाफदेही निगरानी समूहद्वारा काभ्रे भञ्ज्याङमा निर्माणधिन अस्पतालको अनुगमन
पनौती नगरपालिकाले कुकुरको बन्ध्याकरण गर्ने